गगन थापालाई शिक्षा र दिलेन्द्र बडुलाई गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी, अरु कसले कुन मन्त्रालय पाए ? लिस्टसहित — Sanchar Kendra
गगन थापालाई शिक्षा र दिलेन्द्र बडुलाई गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी, अरु कसले कुन मन्त्रालय पाए ? लिस्टसहित
काठमाडौं । ओली सरकारलाई काउन्टर दिन नेपाली ‘कांग्रेसले छायामन्त्रीको सूची तयार पारेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले छाया सरकारका मन्त्रीहरुको नाम अन्तिम टुंगो लगाइसकेको र यसको घोषणा एक-दुई दिनमै हुने समाचार नयाँ पत्रीका दैनिकमा उल्लेख छ ।
काँग्रेसले २१ वटै मन्त्रालयमा छायामन्त्री बनाउने गरी नाम प्रस्ताव गरेको हो । गगन थापा, डा. मीनेन्द्र रिजाल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. नारायण खड्का, मानबहादुर विश्वकर्मा, बद्री पाण्डेलगायत नेता प्रस्तावित मन्त्रीको सूचीमा छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तिम टुंगो लगाएपछि छाया सरकार घोषणा गर्ने तयारी छ ।
छायामन्त्री भए पनि धेरै आकांक्षीबाट छान्न गाह्रो भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । संयोजक छान्न नसकेकैले समय लिएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री बनाउनजस्तै हामीलाई छायामन्त्री बनाउन पनि गाह्रो भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘झन्डा, डन्डा र गाडी नहुने भए पनि गृह, अर्थ, पर्यटनसहितका मन्त्रालयमा धेरैको दाबी हुँदा हामीलाई नाम टुंग्याउन केही समय लागेको हो । अब ढिलो हुँदैन ।’ दाबेदारहरू रिसाउने, गुटगत भागबन्डा खोज्नेजस्ता समस्या नआऊन्् भनेर पनि पहिले नै नाम घोषणा नगरिएको उनको दाबी छ ।
उसो त आज प्रकाशित सबै पत्रिकाहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित छन् । शुक्रबार संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई केही पत्रिकाले सस्तो लोकप्रियता भनेका छन् भने केहीले महत्त्वाकांक्षी ।
नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित समाचारमा अन्नपूर्ण पोष्ट र राजधानी दैनिकको उस्तैउस्तै हेडलाइन छ । दुवैले आगामी आर्थिक वर्ष तीव्र विकासको वर्षको रुपमा चित्रण गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिका र नेपाल समाचारपत्र दैनिकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७को नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् । नागरिक दैनिकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘सस्तो लोकप्रियताको पुलिन्दा’ शीर्षक दिएर टिप्पणी गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले ‘चार वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । सरकारको मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकले भने नीति तथा कार्यक्रमको समाचारलाई ‘विकास र समृद्धिमा केन्द्रित’ शीर्षकमा छापेको छ ।
आजका सबैजसो पत्रिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ भनेर राजतन्त्रको झल्को दिएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम बाहेकका समाचार पनि पत्रिकाका फ्रन्टपेजमा छन् । नागरिक दैनिकमा ‘न्यायालयमा सर्वसत्तावादको संकेत’ शीर्षकको समाचार छ । न्यायालयमा बढेको राजनीतिक प्रभावले मुलुक सर्वसत्तावादतर्फ प्रवेश गर्न लागेको पूर्वन्यायाधीशहरुको अध्ययनले देखाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
राजधानी दैनिकले ‘लोकसेवा आयोगले वैशाखभित्रै भर्ना खोल्ने’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । ५ सय स्थानीय तहले १० हजार कर्मचारी माग गरेको र लोकसेवाले वैशाखभित्रै भर्ना आह्वान गर्ने तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुरले भृकुटीमण्डपमा व्यापारीको रजाइँ रहेको समाचार छापेको छ । बीसको दशकमा गुठीको २१४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर खुला ठाउँ र मनोरञ्जन गर्ने स्थल थियो भृकुटीमण्डप तर अहिले कुरुप बन्दै गएको समाचारमा उल्लेख छ । भृकुटीमण्डपमा ठेलामा सामान राखिएका छन् । टहरा बनाइएका छन् । कहीँ पाल राखेर पसल राखिएका छन् ।